I-8x37 Podcast: WWDC 2017 Isishwankathelo | Ndisuka mac
IPodcast 8 × 37: Isishwankathelo seWWDC 2017
Iyafumaneka ngoku iTunes y YouTube ipodcast yamva nje evela kwiQela lokwenyani le-iPhone y Soy de Mac iqela apho iiyure ezingama-24 kamva sihlalutya zonke iindaba zokuba u-Apple thaca kwinkomfa yokuvula yenkomfa yabaphuhlisi ye-Apple ecosystem, iinkomfa ezibanjelwe eSan José Convention Centre.
Eli qhosha lakutshanje labafana eApple alibonisanga kuphela ezinye zezinto ezintsha ezinokufika ngoSeptemba kwiinguqulelo zokugqibela, kodwa noApple wasebenzisa isakhelo Kwaziswa iMac kunye neMacBook Pro Refresh, Ukuzisa iMac Pro, iNew 10,5-Inch iPad, kunye neKhayaPod.
Kule podcast yokugqibela sihlalutye ezinye zezona zinto zintsha zivelayo kulo msitho, umsitho ukuba ubunokuba nethuba lokuwulandela ubumnandi ngaphandle kokuhlala iiyure ezimbini ezinesiqingatha, ixesha elingaqhelekanga. Eyona nto itsale umdla wayo, ukongeza kwixesha abalinikeleyo kwi-iPad entsha, yayilixesha elincinci abalichithileyo behambisa iindaba ze-iOS 11 ukuba iya kufumaneka kuphela kwi-iPad, ezinye izinto ezintsha ezenza esi sixhobo sibe ngaphezulu kwe-iPhone enescreen esikhudlwana.
Sikwathethile ngePodPod entsha, isixhobo esithe nkqu noApple uqobo akayazi indlela yokuyichaza kakuhle, kuba ngenene lukhuphiswano lweAmazon Echo kunye neKhaya likaGoogle, nangona kubonakala ngathi ngenxa yokungazithembi kwabo kuSiri abafuni ukusebenzisa igama lomncedisi weApple egameni lemveliso. Ukuba ufuna ukuthathela ingqalelo zonke iipodcast esizipapasha veki nganye, eyona nto unokuyenza kukubhalisela ijelo lethu kwi-iTunes. Okanye ukuba ukhetha, ungazonwabela ngejelo lethu le-YouTube, apho sisasaza khona kwaye ungathatha inxaxheba ngokusibuza imibuzo, uphawule ngezihloko esithetha ngazo ...
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » IPodcast 8 × 37: Isishwankathelo seWWDC 2017